Gearbest flash deals များကိုလက်မလွှတ်ပါနှင့်။ မင်းယုံမှာမဟုတ်ဘူး !! အ | Androidsis ပါ
Gearbest flash အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။ သူတို့ကအိမ်ကိုပြတင်းပေါက်ကနေထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။
Hoy os traigo un artículo diferente en el que os quiero informar y avisar para que estéis alerta sobre las ofertas flash de Gearbest que comienzan mañana mismo en apenas 15 horas. O lo que vieneaser lo mismo, မနက်ဖြန်မေလ ၁၀ ရက်၊ စပိန်စံတော်ချိန်ည ၉ နာရီတွင် Flash စတင်သည်.
အချို့သော Gearbest flash အပေးအယူ စိတ်ဝင်စားစရာပင်လယ်တစ်ခုဆိုတာငါတို့ကြိုမြင်တယ်၊ သူတို့မှာသူတို့ဘယ်လောက်ကြပ်သလဲ၊ စျေးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပိုစဉ်းစားတာကနည်းပညာထုတ်ကုန်ရောင်း ၀ ယ်မှုအတွက်ပထမဆုံးနဲ့အဓိကအကျဆုံးတင်သွင်းမှုတွေထဲကတစ်ခုဆိုတာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ တရုတ်ပြည်တံတိုင်းကြီးမှထုတ်ကုန်များစတိုးဆိုင်များ။
မင်းရဲ့အစာစားချင်စိတ်ကိုလျှော့ချဖို့မနက်ဖြန်မနက် ၉ နာရီကနေငါတို့တွေ့နိုင်တဲ့ဥပမာအချို့ကိုမင်းကိုငါပြောမယ် Gearbest flash အပေးအယူ:
သတိရပါ မနက်ဖြန် မှစတင်၍ Gearbest မှဤ flash deals များသည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ပြီးထုတ်ကုန်အရေအတွက်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာအသက်ဝင်မည်ဖြစ်သည်.
1 Elephone S7 4G
2 Elephone S7 mini 4G
El Elephone S7 4G သည်ယူရို ၂၄၂ ဖြစ်သည် ယခုမယုံနိုင်စရာပရိုမိုးရှင်းနှင့်အတူ Gearbest flash ကမ်းလှမ်းချက်ကို ၁၆၄ ယူရိုဖြင့်သာကျွန်ုပ်တို့ရှာနိုင်သည်ထုတ်ကုန်၏ပုံမှန်စျေးနှုန်းတွင် ၇၈ ယူရိုထက်ပိုမပိုဘဲ ၃၁% လျှော့စျေးဖြင့် ၃၁% လျှော့စျေး။ ဤသီးခြား terminal ကိုအစီးရေ ၁၅၀ သာကန့်သတ်ထားသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်ဤစစ်မှန်သောဈေးဆစ်မှုကိုလက်လွတ်မခံဘဲပြေးရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးသည်။
Aunque en el caso del Elephone S7 mini la verdad es que el ahorro es bastante inferior, si tenías pensado en comprarte ese terminal en concreto, estás de suerte porque con esta oferta flash de Gearbest en lugar de pagar los 149 euros de su precio oficial, ၎င်းကို ၁၂၇ ယူရိုဖြင့်ရနိုင်သည် 18% လျှော့စျေးနှင့်အတူ။ ဤ terminal တွင်အလုံးရေ ၅၀ ကို flash offer တွင်တင်ထားပြီးသင်စိတ်ဝင်စားလျှင် ၄၁ ယူနစ်သာရှိနေသောကြောင့်သင်အမြန်သွားနိုင်သည်။
ထပ်တလဲလဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ဥပမာနှစ်ခုကိုမင်းကိုငါပေးချင်ခဲ့တဲ့လက်တွေ့ဥပမာနှစ်ခုကဘယ်လောက်လဲ။ Gearbest မှဤ flash ကမ်းလှမ်းချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်များသောလျှော့စျေးများဖြင့် terminal အမျိုးမျိုးကိုတွေ့နိုင်သည်.
ဒါကြောင့်မြန်မြန်တက်ဖို့ငါတို့အကြံပြုတယ် စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်သည်သင်ယခုအချိန်ကတည်းက ၀ ယ်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားနေခဲ့သောကြောင့်မလွတ်ပါစေနှင့်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » Gearbest flash အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။ သူတို့ကအိမ်ကိုပြတင်းပေါက်ကနေထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။
Telegram အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် Bot ၂ ခု
ဤရွေ့ကား Play Store တွင်စျေးအကြီးဆုံးအက်ပ်များဖြစ်သည်